Ukurhoxa kwabucala kwiihektare eziyi-130
Ifama sinombuki zindwendwe onguPoloma Getaway
Ifama yethu yindawo yokuhlala xa ufuna ukubaleka!
Sicinge ngayo yonke into ke xa ufika, konke okufuneka ukwenze kukuphumla kwaye wonwabe!
Ndibuliswe ngeeveranda ezitshayelayo, ifama yethu yendlu enkulu eboniswe ngokungenamkhethe inamagumbi okulala ama-4, inkosi eneen-suite kunye ne-WIR, amagumbi okulala 2, 3 kunye nama-4 onke ane-BIR. Igumbi lokuhlambela losapho kunye nempahla yokuhlamba, ikhitshi elikhulu elivulekileyo elivulekileyo kunye nendawo yokutyela enomlilo wamaplanga aqinileyo, ekufuphi negumbi lokuphumla elisemthethweni elikhanyiswe lilanga kunye nesidlo.
Iyunithi yabucala edityaniswe nendlu iyafumaneka kwiindwendwe ukuba ungathanda ukuhlalisa iindwendwe ezili-9+ okanye unikeze indawo eyahlukileyo yenxalenye yeendwendwe zakho. Iyunithi inegumbi elinye lokulala elineplani evulekileyo ikhitshi / izidlo / indawo yokuhlala kunye negumbi lokuhlambela elifakwe kwigumbi lokulala. Ukubandakanya iyunithi ekubhukishweni, kuya kufuneka ukuba ubhukishele iindwendwe ezili-10 ukuze ixabiso le-$ 150 elongezelelweyo ngobusuku lifakwe (iyunithi ayiyi kufumaneka ngexesha lokuhlala kwakho ngenye indlela). Nceda ucebise ukuba iindwendwe ezili-10 aziyi kuhlala ngexesha lokuhlala kwakho kwaye ubhukishe kuphela i-10 ukuze ube nokufikelela kuzo zombini izindlu.
Yonwabela eyona hlabathi yomibini! Ukuqhayisa ngeembono zepanoramic kunye nokuqhuba nje okufutshane ukusuka kwisitalato esikhulu saseKilmore (iSitrato saseSydney), ifama yethu ibonelela ngeyona ndawo intle yokuhlala emaphandleni.
Umbuki zindwendwe ngu- Poloma Getaway
Siza kuqhagamshelana nawe ngaphambi kokufika kwakho ukuze silungiselele ukuhla kwepropathi kunye nezinye iinkcukacha ezintle.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Kilmore East